ngezinye izikhathi Worms abe usongo olukhulu empilweni ngisho ukuphila kwezilwane. Abenzi kuphela kuthinte lokugayeka kokudla emzimbeni izinja, kodwa futhi kakhulu ukuba zimbi kakhulu esimweni sabo somzimba jikelele, futhi ngezinye izikhathi ube imbangela engaqondile nezinye izifo. I ngokweqile ezidala emzimbeni kungabangela ukudakwa, okuyinto kusongela impilo isilwane. Ngakho-ke kubalulekile ukukhetha ngempumelelo futhi ngesikhathi esifanayo ukuvikela sine. Abaningi bacabanga ukuthi lokhu kufaneleka ukusebenzisa "Dironet" izinja. Umhlahlandlela ukulungiselela evumela ukuba baqonde indlela esebenza kahle ngayo. Lokhu kuzoxoxwa ngakho kulesi sihloko.
"Dironet" inja imfundo manual libhekisela eqenjini anthelmintics spectrum ebanzi senzo. Kuyinto ngempumelelo mayelana wonke amaqembu alibi nazo izimpethu futhi izibungu nezinye izinambuzane isikhumba. Isenzo lengentiwa isimiso esebenzayo zomuthi "Dironet" izinja. Imiyalelo ukusebenzisa leli qembu zihlanganisa izinto ezilandelayo: praziquantel, pyrantel pamoate futhi ivermectin.
Izindlela kuyinto ngesimo amaphilisi, lehla kwi buyabuna futhi ukumiswa (ifomu ukukhululwa kuyakhethwa ngokuhambisana puppy yobudala kanye izici ngamunye).
"Indawo-ku Dironet" ngoba izinja inhlukano uncoma ngenjongo ukulawula lezi zifo ezilandelayo: nematodes, tsestoz, dirofilariasis. Lesi sidakamizwa sisiza ukuqeda ezinhlotsheni eziningi ezidala, kuhlanganise isikhumba.
umphumela ezenza imithi
nomuthi Kubhekwe ungachazwa ngokuthi izingxenye zalo esikuthola kalula kakhulu umzimba, futhi ngemva nje inkathi isikhathi esingamahora amabili kuya eziyisishiyagalolunye ngemva kokuphathwa izinto ngokuphelele zonke asebenzayo ukufinyelela esiphezulu lokuhlushwa kungenzeka egazini isilwane plasma. ezisebenzayo ezakha "Dironeta" kuthinte amangqamuzana ezinzwa e-amagciwane, kanye kwemisipha amaseli ayo, zikhala ukudluliswa kwamanyuroni. Lokhu, kwenza abantu bakuphathe a ukukhubazeka okuphelele futhi ukufa alandelayo helminth. Umuthi akuyona yingozi uma sisetshenziswa kahle ukulandela izincomo zonke kwabakhiqizi.
Kubalulekile banamathela umthamo edingekayo esimweni lesi sidakamizwa "Dironet" izinja. Ukufundiswa uncoma akunika ezifuywayo umthamo owodwa we izidakamizwa wake wachaza ngaphambi yokudla ekuseni. Uma ungeke ukwazi ukondla izilwane zinjalo, uzofaka ibutho izidakamizwa, usebenzisa dispenser ozinikele. I Isikali kumele kunqunywe esekelwe sibalo elandelayo: iphilisi elilodwa imithi ngoba zonke Kilos eziyishumi isisindo isilwane.
Ngaphambi ukusebenzisa lolu izidakamizwa, asikho isidingo ukunikeza laxatives inja noma olukhethekile lokudla.
I Kunconywa njalo ezinyangeni ezintathu njengoba indlela yokuvimbela "Dironeta".
Ukwelapha microfilaremia inja kufanele athathe izidakamizwa kanye izinsuku ezingamashumi amathathu.
Kuleso simo, uma esifundeni yokuhlala is abancishwe amathuba e isilwane isifo udaba dirovilyariozom, kufanele usebenzise isikimu ezilandelayo ukuze ukusetshenziswa kwezidakamizwa "Dironet" ngoba izinja (guide): ukumiswa noma ithebulethi ukuze uyiswe kanye ngoMashi noma Apreli, ngenyanga ngesikhathi kusuka April kuze Okthoba, futhi okokugcina ngonyaka - kanye ngoNovemba.
Kukhona ezinye contraindications ukusetshenziswa kwezidakamizwa "Dironet" izinja. Imiyalelo lehla, ukumiswa kanye amaphilisi ngokumelene izimuncagazi is hhayi Kunconywa ukunikeza Bitches abakhulelwe noma lactating, kanye nabamele izinhlobo sheltie, bobtail futhi Collie. Ngaphezu kwalokho, "Dironet lathi" asivumelani nemithetho iyiphi nemikhiqizo into ezifana piperazine.
Esimeni lapho izidakamizwa isetshenziswa kuhambisana imfundo, okuvela kuyo yini imiphumela emibi cishe ezikhishiwe.
Nokho, ngezinye izikhathi kukhona ezinye engathandeki komzimba okufana yokungezwani komzimba, okungase kubangelwe ngabanye ukungabekezelelani izingxenye isilwane ngabanye kusho "Dironet" izinja. Imiyalelo (amaphilisi kufanele ukusetshenziswa inqanyulwe) yazisa ukuthi imishanguzo uma kungenjalo kufanele wavumelana onguchwepheshe.
Izici isicelo futhi analogue
Kubalulekile ngokuqinile ukugcina izinyathelo inhlanzeko nokuphepha for ekuphatheni amakhemikhali ngesikhathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa "Dironet" izinja. ukusetshenziswa kanye nemiyalelo Isikali kufanele ihambisane kahle.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi lokhu izidakamizwa ayinakho analogue emakethe khulula.
abanikazi bezinja zincamela ukukhiqiza njalo "Dironet" nezilwane abazifuyile njengoba prophylaxis. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi i-worm kungabi khona noluncú zonke izilwane, kungakhathaliseki indlela yabo yokuphila. Ngakho-ke, hhayi nje kuphela lezo izinja ezihlala izimo egcekeni emizini yabazalwane beswele lokuvikela, ngoba zikhona izindlela eziphumelelayo zokusakaza izimuncagazi onhlobonhlobo, kuhlanganise sisemoyeni.
Ukuphumelela lesi sidakamizwa "Dironet" kuqinisekiswa umkhuba. Abanye abanikazi babike ukubukeka ukuhlanza, ukukhishwa yisisu ngemuva kokuthatha izidakamizwa. izimpawu ezinjalo ezingavela ngenxa eqinile ubuthi helminths. Ngiyesaba lokhu akudingekile, izimpawu zinyamalale bebodwa, njengoba ukususwa ezidala kusukela isilwane umzimba. Uma side effects enamandla kakhulu, kufanele uthintane ne wezilwane abanamakhono ingagunyaza ezidingekayo yokwelapha eyayihambisana nalo.
Njengomthetho, nezinjana zidla izidakamizwa njengoba uswidi, kodwa ngezinye izikhathi zikhona izinkinga nge isingeniso sakhe. Uma impatho is phansi umdlwane noma ngaphezulu inja owenqaba ukuthatha imithi, kunokuba amaphilisi elula ukusebenzisa ukumiswa. Asemaphaketheni izidakamizwa iqukethe isipetu dispenser ekhethekile, esiza ukwethula ukuthi ukumiswa kwakhe ngomlomo iqondiswa ngokuphepha futhi ngaphandle kobuhlungu ngangokunokwenzeka umdlwane.
Abanikazi kufanele sinake ngokuthi impilo nezilwane abazifuyile. Phela, umthwalo wokunakekela izimpilo nenhlalakahle sesilwane amanga ngokuphelele eseduze kwayo. Izifo ezifuywayo, kuhlanganise ukudakwa helminths kubangele ukukhathazeka abalimi okhathalelayo. Nokho, i-choice umkhiqizo yekhwalithi ephansi kuyingozi nse yokungenzi. Yingakho kubalulekile ukuba baqikelele kukhethwa anthelmintics. Izibuyekezo Ezinhle izidakamizwa "Dironet" ukuvumela ephephile ukuyisebenzisa izinja. Asebenza ukusetshenziswa prophylactic kwezimali nokunamathela kakhulu imiyalelo kuqinisekisa enhle engokomzimba isimo ezifuywayo.
umzimba Hlanza kanye nesimo esihle sempilo kuzovumela inja ukulondoloza nesimo sijabulise futhi alethe eziningi imizwelo ezimnandi kubanikazi bazo. Nakekela labo abanithandayo ukwedlula ukuphila ngokwayo!
Izidlaliso Spitz abafana. Indlela igama Pomeranian?
Funda ezithakazelisayo: yiziphi izinhlobo inja
Imvunulo Zorro - ngubo fancy khona ngithanda umfana othile, izandla zakhe
Ballroom izicathulo izingane kanye nabantu abadala: usayizi, kanjani ukukhetha
Scarlet Monastery. Incazelo indawo